Ukuhanjiswa kweHydrotreating Catalysts
Isalve yeCarbon yeMolekyuli (CMS)
Alumina yenziwa yasebenza
Iicatalyst zethu zokubuyisela kwisulphur ezinokuzanelisa zonke izicelo ezinxulumene noko. Iqela lokuthundeza iqela elipheleleyo kubandakanya i-alumina esekwe kwigatya yokuthundeza, i-alumina esekwe kwigatya yokuthambisa, i-titanium esekwe kwigatya, igatya lokunxibelelana elininzi, ioksijini yokuvavanywa kwegatya.
Sinikezela ngee-silica gels ikakhulu ezisetyenziswa kwi-PSA hydrogen processing kunye nasekucoceni irhasi yendalo.
Iisefa zethu zeemolekyuli zinokwanelisa izicelo zakho zeeyunithi zokwahlulwa komoya zeCryogenic (ii-ASUs) zakhiwe ukubonelela nge-nitrogen okanye ioksijini kwaye zihlala zivelisa iargon, ukomisa igesi yendalo kunye nobumnandi, ukucocwa kwehydrogen kwinkqubo yePSA
Kwizinto ezahlukeneyo zokuhambisa amanzi, ii-catalysts zethu zokuhambisa amanzi zinokuzanelisa izicelo zakho zokucoca ii-HDS ze-naphtha, i-HDS kunye ne-HDN ye-naphtha, i-HDS kunye ne-HDN ye-VGO nedizili, i-HDS kunye ne-HDN yepetroli ye-FCC, i-HDS ye-VGO kunye ne-ULSD
Sinikezela ngee-catalysts ezipheleleyo zokwenza uhlengahlengiso oluqhubekayo lokuqhubekeka kwe-catalytic (CCR) kunye nokuhlaziywa kwakhona kokuphinda kulungiswe ngokutsha (CRU) kwizicelo zakho ozikhethele zona ukuze ufumane ipetroli kunye neemveliso ekujolise kuzo ze-BTX.
Sikwabonelela ngokudibanisa uthotho kunye neqela lokusetyenziswa kweekhemikhali zepetroli kunye nendalo ekusetyenzisweni kweekhemikhali ezinje ngee-catalysts kunye ne-adsorbents kwiyunithi ye-ammonia eyenziweyo, iyunithi yokuvelisa i-hydrogen, i-acetylene hydrogenation catalyst ekusebenzeni kwe-PE, i-propane dehydrogenation catalyst, njalo njalo.
Iiseyile zethu zecarbon molecular sieve zinokwanelisa yonke inkqubo yakho ye-PSA ye-nitrogen yokucoceka okuqhelekileyo kwe-nitrogen (99.5%), i-nitrogen ephezulu (99.9%) kunye ne-nitrogen ephezulu kakhulu (99.99%). Kwakhona, i-CMS yethu inokusetyenziselwa ukucoca igesi yendalo kunye negesi yamalahle.
Sinikezela iintlobo alumina serial ukwanelisa isicelo sakho kwigesi eqhelekileyo kunye nokomisa, processing PSA. Alumina catalysts as adsorbents for Polymer production purifying (PE), CS2, COS and H2S ukususwa, ukususwa kwe-HCl kwiigesi, ukususwa kwe-HCl kulwelo lwehydrocarbon, ukomisa, ukucoca (iMultibed).
Iicarboni zethu ezisebenzisiweyo zisetyenziselwa i-PSA hydrogen processing ekususeni iikhompawundi ze-C1 / C2 / C3 / C4 / C5 kwisitokhwe sokondla, iMercury isusa ukucoca igesi yendalo.
Rm, 102-104, Isakhiwo 1st, No. 2008, DongChangZhi Rd,
Ifowuni: + 86-021-5119 8971